Xabad Joojin la kala dhex dhigay Maleeshiyaadkii ku dagaalamay Baladweyne * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xabad Joojin la kala dhex dhigay Maleeshiyaadkii ku dagaalamay Baladweyne
By MAREEG	 Last updated Dec 16, 2015
Baladweyne ( Mareeg.com)-Beelihii ku dagaalamayay Maalmihii la soo dhaafay Magaalada Baladweyne ee Gobolka Hiiraan ayaa Xabad Joojin la kala dhex dhigay.
Heshiiska la kala dhex dhigay dhinacyada isku hayay Baladweyne ayaa ka dambeeyay kadib markii Wafdi Xukuumadda Soomaaliya ka tirsan iyo Masuuliyiin ka socda Maamulka Galmdug ay gareen Magaalada Baladweyne.
Yuusuf Axmed Dabageed oo ah Guddoomiyihii hore ee Gobolka Hiiraan ayaa cadeeyay in la isku raacay illaa 3 qodob oo ay ka mid yihiin in Xabadda la joojiyo , lana kala qaado Maleeshiyada labada dhinac.
Dagaallo saako ka dhacay Baladweyne ayaa la soo wariyay in dadkii ku dhintay uu ka mid ahaa Sarkaal Ciidamada dowladda Federaalka ka tirsanaa gaar ahaan Ciidamadii la kala dhex dhigayay Maleeshiyada dagaalameysay.
Shirka wadatashiga oo Mar dhow ku dhaaqayaHabka Doorashadda iyo qaabka Dowladda Cusub.